सलाम छ! छाउपडीमा धावा बोल्ने नयाँ युगकी आमालाई « Postpati – News For All
सलाम छ! छाउपडीमा धावा बोल्ने नयाँ युगकी आमालाई
‘बधाई छ छोरी तिमीलाई, आज तिमी पहिलो पटक महिनावारी भएकी छौ । आजदेखि तिमी महिलाहरूको सबैभन्दा ठूलो शक्ति प्रजननका लागि सक्षम भएकी छौ । आज तिम्रो यौनाङ्गबाट बगेको रगत तिमिले गरेको कुनै पाप होइन, शक्ति हो। त्यसैले यसमा गर्व गर ।’
कुदृस्टी र कुरीतिले जेलिएको समाजको आगनबाट जुरुक्क उठेर, एउटी साहासी आमाले आफ्नी छोरीको यौवनमा पहिलो पटक महिनावारी हुँदा सामाजिक संजालमा खुलेर बधाई दिइन। नेपाली समाजमा यस्तो कार्य सबैलाई अपाच्य हुनसक्छ तर परिवर्तन चाहाने सोंचहरुलाई अबस्य पाच्य हुनेछ ।
ति साहासी परिवर्तनकारी आमा हुन् राधिका सापकोटा। जस्ले नयाँ युगकी छोरी सदिक्षा सापकोटालाई जन्म दिएकी छिन र छोरीको यौवनले निम्त्याएको महिनावारी प्राकृतिक देन हो।
छोरीहरुको प्राकृतिक देनमाथि कुसंस्कारका बादशाहहरुले बारम्बार धावाबोल्दा कयौ छोरीहरुले सदाकालागि यौवन बिसाएर संसार नै छोडेका छन्। पापको संज्ञा दिएर अछुत बनाई मानसिक यातनाहरु दिरहेका छन्। धार्मिक चिन्तनबाट होस् या लैगिंक दृष्टिकोणबाट होस् शायद यस्ता कुकार्यहरु अझै जिवितै छन्।
तर आज समय भने बदलिएको छ। छोरीहरु उन्मुक्तिका सन्देशहरु बोकेर सगरमाथको उकालोमा उक्लिरहेका छन्, परिवर्तनकारी नव युगको बाटोमा अपहेलित छोरीहरुको आरक्षण निर्माणाधिन अवस्थामा छ।
त्यसको एउटा उदाहरण हुन भाग्यमानी छोरी सदिक्षा सापकोटा, जसले राधिका जस्ती आमा पाएकी छिन।
सारा जगत परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ तर पितृसत्तात्मक राज्यको अबसेष बोकेर केहि अस्त्रधारी काला पुरुषहरु मुन्टो ठड्याउने हर्कत गरिरहेका पनि छन्।
किनकि नेपाली समाजमा राधिका सापकोटाले आफ्नी छोरीको महिनाबारि हुँदा निसंकोच बधाई दिनुले तिनैको मस्तिष्कमा तरंग पैदा गरिदिएको छ। ति काला सर्पको वर्ण बोकेका बर्णधारी काला पुरुषहरु नै हुन्।
आर्को तिर छोरीहरु उन्मुक्तिको सागरमाथा चढ्न चाहेको देख्ने रहर बोकेकाहरुले उनको यो बधाई प्रति अग्रगामी सोंच भन्दै समर्थन र सदभाब प्रकट गरेका छन।
छोरीहरुको प्रजनन् क्षमतामा परिवर्तन आउदा प्राकृतिक रुपमा यौनाङ्गबाट बगेको रगतलाई कुसंस्कार बोकेको समाजले पापको संज्ञा दिनु र उक्त महिनावारी अबधिभर अछुत बनाई राख्ने प्रथा समाजमा अझै ज्युदै रहनु २१औ शताब्दीको अपमान हुनु हो।
जुन प्रथाले छोरीहरु ज्युउने अधिकार हरण गरेको थियो त्यसको बिरुद्द सचेत आमाहरु धावा बोल्दा खिल्ली उडाउने बाबाआमाहरु देख्दा उनीहरु प्रति दया जागेर आउछ।
राधिका सापकोटाको उक्त सोंचलाई धेरै परिवर्तनकारी सोंच भन्नेहरु पनि थुप्रै भेटिए तर केहि बुझेरपनि बुज्रक बन्नेहरुले उनको फेसबुक स्टाटसलाई बोकेर खिल्लीबाजी गर्दै सामाजिक संजालमा दौडिरहेका पनि छन्।
यस्तो बिरोधको हर्कतले परिवर्तन चाहाने महामानवको मस्तिष्कमा नै कुरीतिले घर जमाएर बसेको प्रस्टै देखिन्छ।
छोरी माथि कुसंस्कारका हतियारहरु प्रहार हुँदा रमाएर बस्न चाहानेहरु अब कर्णालीको छाउपडी पर्थालाई नियाल्न कर्णाली पुग्नु पर्दैन, केवल राधिका सापकोटाको फेसबुक भित्तोमा हेरे पुग्छ ।
अचम्म के लाग्छ भने, पढे लेखेका प्रभुत्व मानिने व्यक्तिहरुबाट नै छाउपडी भन्दा पिछडिएको चेतना उजागर भएको पाइयो। उनका छोरीहरुको हालत के होला ?
परिवर्तनकामी पुरुषहरु आफ्नो व्यंग्य शैलीमा राधिकालाई बिरोध गर्दै, पुरुषप्रधान देशकाको बुज्रक पुरुसोत्व अनुहार प्रदर्शन गरेका छन्। यिनै पुरुषहरुको चेतनाले पितृसत्तात्मक सासन सत्ताको अबसेश कहिलै मेट्न नदिई जोगाई राख्ने हर्कत देखिन्छ।
जसलाई सम्मान अधिकार खोज्ने महिलाहरु माथि गरिएको खुल्ला विभेदकारी आक्रमण मान्न सकिन्छ।
सासक मनोवृत्ति बोकेका पुरुषहरुलाई महिलाहरुको इज्जत, प्रतिष्ठा र नैतिकतालाई ढाल बनाएर खिल्ली उडाई रहेका छन्, जुन असमान लैंगिक अहंकारबादी चिन्तनबाट महिलाहरुलाई बन्दि बनाएर राख्ने कुचेष्टा हो। यो नै पितृसत्तात्मक अहंकार हो।
केहि महिलाहरु खुम्चिएको दास मानसिकताबाट आलोचना गरेको पनि देखियो। उनीहरु धार्मिक कुरीतिको बन्धनबाट माथि उठ्न चाहादैनन र सम्मान अधिकार सहित परिवर्तनको खुल्ला आकाशमा उड्न चाहादैनन बरु दासताका जन्जिरहरुमा बाँधिन चाहन्छन।
आफुलाई दाम्लोले बाँधेर कुरुरताको कट्घेरामा उभ्याउनु मात्रै दासत्व होइन, प्राकृतिक रुपमै एउटी महिला महिनावारी हुँदा निर्धक्क भएर सेलेब्रेसन गर्न नपाउनु, पापको संज्ञा दिएर अछुत भइ बन्दि अनुभूत गराउनु पनि दासत्व हो।
असत्य माथि सत्यको जित अबस्य हुन्छ, तर हार कहिलै नखानु। नयाँ युगमा जन्मिने छोरीका आमाहरु राधिका बन्नु पर्छ, अनि मात्र छोरीहरुलाई दासत्वबाट मुक्ति दिलाउन सकिनेछ।
सलाम छ, छाउपडी कुपर्थामा धावा बोल्ने नयाँ युगकी यिनै आमालाई। जसले अवला छोरीहरु कहिलै जन्माउने छैनन् र समान अधिकारका रक्षक हुनेछन।
३ असार २०७४, शनिबार को दिन प्रकाशित
पोष्टपाटी समाचार प्रभाव: बाहिरबाट आएकालाई गंगादेव गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्यो